सामाजीक काम गर्दा आनन्दको अनुभुती हुन्छ : गीता भटराई - Sabal Post
सामाजीक काम गर्दा आनन्दको अनुभुती हुन्छ : गीता भटराई
२३ मंसिर २०७५, आईतवार ० बिचार / प्रतिक्रिया
महीला सशक्तीकरणमा महत्वर्पुण भुमीका निर्वाह गर्दै महीलाहरुलाई अगाडी वढ्ने पे्ररण प्रदान गर्ने महीला उत्थान संघ झापाको संस्थापक अध्यक्ष ,शान्तीमालीकाको उपाध्यक्ष संगै दर्जन भन्दा वढी संघ सस्थाको नेतृत्व सम्हाली सक्नुभएकी साप नेपालकी अध्यक्ष गीता भट्टराई संग उहांका विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्दै गर्दाका अनुभव समेटेर गरीएको कुराकानी
म अहिले विभिन्न सामाजीक संस्थामा कृयाशील भएर समाजसेवामै कृयाशील छु ।राष्ट्रय महीला अधिकार सरोकार मंच झापाको पुर्व अध्यक्ष भएका काम गरे रेडक्रसमा पनी लामो समय नै काम गरे त्यस्तै गैर सरकारी संस्था समन्वय समीतीको झापाको उपाध्यक्ष छु । परीवार नियोजन संघमा पनी आवद्य छु । त्यस्तै दमक सरोकार समाजको उपाध्यक्ष हुदै अहीले रुद्रमती सरसफाई अभियानको सदस्यको रुपमा निरन्तर ५ वर्ष देखी रुद्रमती सफाईको कार्यमा सवैलाई प्रेरण दीदै लागी रहेकी छु । विभिन्न संघ सस्थाको काम गर्ने क्रममा म साप नेपाल संग जोडीन पुगे र यो संस्थाको सदस्य हुदै आज साप नेपालको अध्यक्ष भएकानाताले अहीले यो संस्थाका विभिन्न कृयाकलापमा सहभागी हुने देखि विभिन्न कार्यकमहरु सन्चालन गर्ने क्रममा अगाडी वढीरहेकी छु ।
समाजसेवामा लाग्ने प्रेरण कसरी प्राप्त गर्नु भयो ?
मेरो सासु आमा सामाजीक काममा खटीरहनु भएको मैले देखेकी थिए । मेरो सासुआमाको प्रेरणले गर्दा मलाई पनी समाजसेवामा लाग्न प्रेरीत भए म त्तकालीन अवस्थामा कृयाशील आमा मीलन को सस्दयवाट समाज सेवाका लागेकी थिए । म २०४६ सालवाटनै महिला अधिकारको क्षेत्रमा निरन्तर लागी रहेकी छु । धेरै संस्थामा कृयाशील हुदै गर्दा पनी मलाई समय व्यवस्थापन गर्न कठीनाई भएको छैन । म जीवनका धेरै समय समाज सेवा संगै महीलाहरुको समृदी कसरी गर्न सकीन्छ भन्ने विषयमा काम गरेर महीला अधिाकारका क्षेत्रमा विताए अव पनी अन्तीम सास रहुन्जेल समाज सेवामा कृयाशील हुने मेरो ईच्छा रहेको छ ।
साप नेपाल भनेको कस्तो संस्था हो ?
साउथ एसीयन पार्टनरशीप नेपाल २०४८ साल भन्दा पहीला देखिनै नेपालमा कृयाशील रहेको संस्था हो । पहीला यो ष्लनय को रुपमा नेपालमा कृयाशील रहेको थियो भने अहिले लनय पय रुपमा काम गरीरहेको संस्था हो । काठमाडौमा मुख्य कार्यलय रहेको यस संस्थाको अहिले चितवन ,मोरन , मकवानपुर ,लगायतका ठाउंमा आफ्नो कार्य अगाडी वढाईरहेको छ ।
साप नेपाल ले अहिले के कस्ता कार्यक्रम सन्चालन गरीरहेको छ ?
हामीले अहीले सम्म ३६ ओटा जिल्लामा काम गरीसकेका छौ । साप नेपालले विभिन्न क्षेत्रमा कार्य गरीरहेको छ । खानेपानीको क्षेत्रमा , स्कील डेभलपमेन्टको क्षेत्र आयमुलक ,शिप शुलक ,क्षमता अभिवृदी को क्षेत्रमा पनी काम गरीरहेका छौ हामीले छात्रावृती वितरण पनीगर्ने गरेका छनै त्यस्तै महीला संघ सम्वन्धीत संस्थाहरुसंग पनी समन्वय गरेर कार्य गर्ने गरेका छौ । त्यस्तै २५० वर्ष अगाडी नेपाल सवै दृष्टीले जुन स्थानमा थियो आज दुखको कुरा भन्नु पर्छ नीकै तल परेको अवस्था छ । पुरानो दिनको सम्झनामा प्रत्येक पुर्णीमामा पुर्णीममा सम्वांद कार्यक्रम सन्चालन गरीरहेका छौ । यो कार्यक्रमको उदेश्य नेपालको सांस्कृतीक पर्यटकीय लगायत नेपालको राम्रो पक्षको वारेमा छलफल गर्ने र नेपाल लाई सवैका सामु गौरवाशाली ईतीहास चीनाउनु हाम्रो उदेश्य रहेको छ ।
साम नेपालले सन्चालन गरेका कार्यक्रमको प्रभाव कस्तो परेको छ ।
साप नेपालले चीतवनमा चेपान जातीसंग पनी काम गरीरहेको छ । उनीहरुको आयमुलक शीपमुलक र क्षमता अधिवृद्य संग सम्वन्धी काम भईरहेको छ । यो कार्यक्रमले उनीहरुको चेतनाको स्तर माथी उठेको छ । यस पालीको स्थानीय निर्वाचनमा केही पदमा निर्वाचीत पनी भएको छन्
जन्ती बसमा करेन्ट प्रकरणः मृतक परिवारलाई प्रदेश…
खोपबारे जान्नैपर्ने कुरा : कुन खोप कहिले…
अस्ट्रेलियामा एक नेपाली यौन प्रकरणको आरोपमा पक्राउ